Imfesi emhlophe kumntwana
Abasetyhini abasandul 'umama baninzi, banamkelekanga naluphi na utshintsho malunga nempilo yengane yabo. Awalandeli nje kuphela umbandela womntwana, kodwa banakekele ingqalelo nayiphi na inkcazo engachaza ukuba into ethile iyancipha ngomzimba womntwana. Oku kusebenza nakwisihlalo somntwana. Umama, utshintshe i-diaper, uhlolisise ngokucophelela kwaye ufunde okuphakathi kwayo, umbala, iphunga kunye nesigxina. Ukunyamekela okunjalo kunceda ekuqaliseni umgangatho, apho kuyimfuneko ukuthatha amanyathelo okuchonga izizathu zokuphambuka kwimpilo yabantwana kunye nokuziphelisa.
Kwiintsana ezingakakhange ziguqule unyaka ubudala, kunzima ukucacisa umgangatho ngokumalunga nemfesi. Umbala, ukuvumba kunye nokungahambisani kweminyana yomntwana omncinci kuxhomekeke kwizinto ezahlukeneyo: umzekelo, nokuba umntwana uyifumene nawaphi na amachiza ekudlulileyo kwangoko, nokuba unina uncelisa okanye unika imixube, kunye neminyaka yobudala bomntwana. Umbala omhlophe we-stool akaqinisekanga ukuba awuqhelekanga, kodwa ayisoloko ibonisa ukuba kukho ukugula okukhulu.
Ukuba umntwana ufumana isondlo sokufakelwa, okokuba ukuhamba kwakhe kwimizimba kunokuba ngumbane okanye umhlophe phantsi kwefuthe kwezinye iintlobo zokutya kwabantwana. Ngethuba lokuqhuma kwamazinyo obisi, ukuba umntwana waqala ukufumana ukutya okuncedisayo, ngoko ukhula lwakhe lunokuguquka mhlophe. Kubantwana abasele bafumana ukutya okuninzi kumntu omdala, iimfesi zinokuguquka ezimhlophe ngenxa yemali eninzi ye-calcium engena emzimbeni kunye nemveliso yobisi. Ukuba umzimba womntwana awukwazi ukwenza umlinganiselo onomdla wee-carbohydrates eziza nokutya, ngoko umxhesho wakhe unokuba lula.
Nangona kunjalo, imfucu emhlophe ayinayo impendulo ekutya okufunyenweyo. Ngamanye amaxesha umbala omhlophe wamagqabi ngenye yeempawu ezibonisa isifo okanye ukuphambuka kwindlela eqhelekileyo yokusebenza kwenkqubo yokutya. Kubalulekile ukunxibelelana nodokotela ukuba umntwana wakho uye wajonga ngokuphindaphindiweyo ukucoca.
Ngokuqhelekileyo ukucinga kokuqala kokuba umfanyana omhlophe ngumntwana wesifo sesifo se-hepatitis. Kodwa abaninzi bacinga ukuba nge-hepatitis kufuneka ukuba ibe ngaphezu kwengubo emhlophe, ukuluhlaza kwesikhumba kunye namehlo kumntwana. Kodwa i-jaundice ayisoloko ihamba kunye ne-discoloration yesikhumba kunye neel eyeballs, i-yellowing ingabonakala kamva, nangemva kwexesha apho imifuno emhlophe yayinguye kuphela uphawu lwe-hepatitis. Kodwa awukwazi ukukhawuleza ukufikelela kwizigqibo, kodwa kuyimfuneko ukubonisa umntwana kwiingcali, ukuqinisekisa okanye ukuphikisa ukuxilongwa kwesigxina ngokuncedisa uphando olufunekayo kunye nokuqokelela ukuhlalutya.
Ukuba umntwana unomsebenzi oqhelekileyo we-gallbladder, iifesi ezimhlophe zingabonakala. Ukunyanzeliswa kubandakanya ukukhutshwa okupheleleyo okanye okukodwa kwiphepha lebhaliary. Kwakhona, ukuba i-bile ingashiyi i-gallbladder kakubi, ngoko iifesi ziluhlaza kunokuba ziqhelekile. I-bile idonsa ngesimo. Sihlalo onjalo ugqirha kuthiwa "i-alcholoid", ewe. ayinayo i-bile.
Kwakhona, amaqela athile asebenzisa iziyobisi kunye nokukhulelwa kwamanzi angathintela umbala weemfesi. Ukuba umntwana unemfestile emhlophe, ubuhlungu besisu kunye nokubetha, oku kubonisa ubukho be-dysbacteriosis. Umbala weemfesi ungaphendukela umhlophe ukuba isifo sobungozi se-rotavirus sikhona emzimbeni womntwana, kodwa ukushisa komzimba, ukuhanjiswa kunye nokuhlanza kwandisiwe, iimpawu ezibandayo nazo zinokwenzeka - ubomvu kunye nomqala wesifo, impumlo yebhola. Izitofu kwiimeko ezinjalo azifumani kuphela zimhlophe, kodwa zibuye zibe nomthunzi oncibiliko, kwaye kwisakhiwo sifana nodongwe olumanzi.
Imfumba emhlophe ebantwini ingaba ngenxa yezizathu ezahlukileyo kwaye oku akusoloko isifo esiyingozi. Ngokomzekelo, iimfesi ziyakwazi ukufumana umgca omhlophe, ukuba umntwana uye wavula amazinyo okuqala. Kule meko, iimfesi ezimhlophe ziyakwazi ukubuyela ngokukhawuleza. Kodwa kunye nokuqhenqa imhlophe yamanzi kungabonakalisa uphawu lwezonyango ezinzulu. Kubalulekile ukufuna uncedo kumgqirha ukuba umntwana wakho unesihlalo esimhlophe ngaphezu kweyodwa, kwaye ngexesha elifanayo ubona umfanekiso wesimo esipheleleyo somntwana.
Izifo ezahlukileyo kwiintsana ezikhulayo
Inguinal and herbilical hernia kubantwana
Izifo zabantwana bamaxesha ahlukeneyo
Ukudumala kwezifo ezithathelwanayo
I-gymnastics yamandla kumncinci
I-dysplasia yokuzalwa engxowanisiweyo
Indlela yokufunda ukukhwela?
Ukukhanya kweRoma, ukunciphisa ukutya
Indlela yokuqala iintlungu zomsebenzi
Indlela yokuphilisa ukubanda emlonyeni ekhaya
Intombazana entsha uTimati idlulisa ixesha kunye ne-Maxim Chernyavsky
Biography yeMatilda Kshessinskaya
I-salum e-salt salted nge salum
Iphupha likaHeroli lomfazi
"I-Factory" soloist uSasha Savelyeva
Pie Ppleapple Pie
I-Shrimps kunye ne-scallops negalikhi